Isifo sikashukela kubantu besifazane > Isifo Sikashukela Sokunqoba!
Isifo sikashukela kwabesifazane: izimpawu nokwelashwa
I-Etiology kanye nokuhlukaniswa Ngokuya ngezici zokuthuthuka kwesifo sikashukela, zihlukaniswe izinhlobo ezimbili: uhlobo 1 (noma ifomu elincike ku-insulin) - kubhalwe, njengomthetho, phakathi kwabantu abasha. ...
I-mestitus yesifo sikashukela sokukhulelwa ngesikhathi sokukhulelwa: izinkomba, ukudla
I-mestitus yesifo sikashukela sokukhulelwa ngesikhathi sokukhulelwa: izinkomba, ukudla i-mestitus yesifo sikashukela kusungulwa ngesikhathi sokukhulelwa (imizwa) futhi kuvame ukunyamalala ngemuva kokubeletha. ...
Ushukela okhulelwe - izimpawu, ngidinga ukudla okukhethekile?
I-mestitus yesifo sikashukela sokukhulelwa ngesikhathi sokukhulelwa I-mellitus yesifo sikashukela ngohlobo lwesifo sikashukela esenzeka kubantu besifazane ngesikhathi sokukhulelwa. Ngemuva kokubeletha, ngemuva kwesikhathi esithile, uvame ukudlula. ...
Izindlela zokuthintela inzalo yohlobo 1 sikashukela: A to Z
4.2. Izindlela zokuvimbela inzalo kwabesifazane abanesifo sikashukela Ezigulini ezinesifo sikashukela zonke izindlela zokuvimbela inzalo ziyasetshenziswa. Ama-IUD afanelekile aqukethe ithusi angasetshenziswa. ...
Ukukhulelwa kushukela: kungenzeka ukubeletha, ungakuvimbela kanjani ubunzima?
Izingozi kanye nezinkinga ezingenzeka ngaphambilini, ushukela bekuyisithiyo esikhulu ekutholakaleni kwezingane. ...